Waa Maxay Shaqsiyaadka Iibsada? Maxaad Ugu Baahan Tahay? Iyo Sideed U Abuurtaa? | Martech Zone
Waa Maxay Shaqsiyaadka Iibsada? Maxaad Ugu Baahan Tahay? Iyo Sideed U Abuurtaa?
Isniin, Maarso 15, 2021 Isniin, Maarso 15, 2021 Douglas Karr
In kasta oo suuqleydu ay inta badan ka shaqeeyaan soo saarista waxyaabo iyaga labadoodaba ka duwan oo sharraxaya faa'iidooyinka wax soo saarkooda iyo adeegyadooda, haddana waxay had iyo jeer seegtaa calaamadda soo saarista waxyaabaha ku jira mid kasta nooca qofka iibsanaya wax soo saarkooda ama adeeggooda.
Tusaale ahaan, haddii rajadaadu ay raadineyso adeeg cusub oo martigelin ah, suuq-geyn ku wajahan raadinta iyo beddelaadyada ayaa diiradda lagu saari karaa waxqabadka halka agaasimaha IT-ga uu diiradda saari karo astaamaha amniga. Waa muhiim inaad labadoodaba la hadasho - oo badanaa waxay u baahan tahay inaad mid walba ku bar-tilmaameedsato xayeysiis iyo waxyaabo gaar ah.
Marka la soo koobo, waxay ku saabsan tahay qaybinta farriinta shirkaddaada mid kasta oo ka mid ah nooca rajooyinka aad u baahan tahay inaad la hadasho. Tusaalooyinka qaarkood ee fursadaha lumay:
Wadahadal - Shirkaddu waxay diiradda saareysaa waxyaabaha ka helaya dareenka ugu badan boggooda halkii ay ka aqoonsan lahaayeen shakhsiyaadka dhab ahaan isbeddelaya. Haddii 1% ka mid ah booqdayaasha bartaada ay isu beddelaan macaamiil, waxaad u baahan tahay inaad bartilmaameedsato 1% oo aad aqoonsato cidda ay yihiin, waxa ku qasbay inay beddelaan, ka dibna aad ogaatid sida loola hadlo kuwa kale ee iyaga la mid ah.
Warshadaha - Barmaamuj shirkadeed waxay u adeegtaa warshado badan, laakiin waxyaabaha guud ee ku jira boggooda waxay la hadlaan guud ahaan ganacsiyada. Maaddaama aysan lahayn warshad ay ku kala sarreeyaan mawduucyadooda, rajada laga qabo inay soo booqdaan boggooda qayb gaar ah ma awoodaan inay indho indheeyaan ama uur yeeshaan sida barnaamijku u caawin doono.
jagooyinka - Waxyaabaha ay shirkaddu ka kooban tahay waxay si toos ah uga hadlayaan guud ahaan natiijooyinka ganacsi ee barnaamijkoodu soo bandhigay laakiin waxay dayacaysaa in la kala sooco sida barnaamijku u caawinayo shaqo kasta oo shirkadda ka mid ah. Shirkaduhu waxay iska kaashadaan go'aannada wax iibsiga, marka waa lagama maarmaan in boos kasta oo la saameeyo lala socodsiiyo.
Halkii aad diirada saari lahayd astaantaada, alaabadaada, iyo adeegyada aad ku hormariso kala duwanaanta waxyaabaha ku saleysan mowqif kasta, waxaad halkii ka eegi laheyd shirkadaada indhaha iibsadahaaga oo aad dhiseysid barnaamijyo fariin iyo fariin toos ula hadlaya dhiirigelintooda noqoshada macaamiisha astaantaada.
Waa maxay Qofka wax iibsada?
Qofka wax iibsadaa waa aqoonsiyo male-awaal ah oo matalaya noocyada rajooyinka ee ganacsigaagu la hadlayo.
Brightspark Consulting ayaa tan bixisa infographic ee Qofka Iibsanaya B2Ba:
Tusaalooyinka Qofka Iibsada
Qoraal sida Martech Zone, tusaale ahaan, waxay u adeegtaa shaqsiyaad badan:
Susan, Madaxa Sarkaalka Suuqgeynta - Sue waa qofka go’aanka gaara marka ay timaado soo iibsiga tikniyoolajiyadda si ay u caawiso baahiyaha suuqgeynta shirkadeed. Sue waxay u isticmaashaa daabacaadayada qalabka baaritaanka iyo cilmi baarista.
Dan, Agaasimaha Suuqgeynta - Dan ayaa horumarinaya xeeladaha sida ugu fiican loo hirgelin karo aaladaha ka caawinaya suuqgeynta, wuxuuna doonayaa inuu la socdo teknoolojiyadda ugu dambeeya uguna wanaagsan.
Sarah, Mulkiilaha Ganacsiga Yar - Sarah ma haysato ilo dhaqaale oo ay ku kireysato waax ama wakaalad suuqgeyn ah. Waxay raadinayaan tabobarro ugufiican iyo aalado aan qaali ahayn si ay uhormariyaan suuqgeynta iyagoon jabinin miisaaniyadooda.
Scott, Maalgashiga Teknolojiyada Suuqgeynta - Scott wuxuu isku dayayaa inuu isha ku hayo isbeddellada ugu dambeeya ee warshadaha uu maalgashanayo.
Katie, Suuqgeynta Intern - Katie waxay u socotaa iskuulka Suuqgeynta ama Xiriirka Dadweynaha waxayna dooneysaa inay sifiican u fahamto wax soosaarka si ay shaqo fiican u hesho markay qalin jabiso.
Tim, Bixiyaha Teknolojiyada Suuqgeynta - Tim wuxuu doonayaa inuu isha ku hayo shirkadaha shuraakada la ah inuu la midoobi karo ama kula tartami karo adeegyada.
Marka aan qoreyno qoraaladayada, waxaan raadineynaa inaan hubinno inaan si toos ah ula xiriirno qaar ka mid ah shaqsiyaadkaas. Xaaladda qoraalkan, waxay noqon laheyd Dan, Sarah iyo Katie oo aan diiradda saareyno.
Tusaalooyinkaan, dabcan, ma ahan noocyada faahfaahsan - waa dulmar guud. Tilmaamaha shakhsiyadeed ee dhabta ahi waa inuu ahaadaa mid qoto dheer oo qoto dheer oo ku saabsan aragti kasta oo ka mid ah shakhsiyaadka shakhsiga, warshadaynta, dhiirrigelinta, qaab dhismeedka warbixinta, goobta juqraafi, jinsiga, mushaharka, waxbarashada, waayo-aragnimada, da'da, iwm. cadee xiriirkaaga wuxuu noqon doonaa lahadalka kuwa iibsada mustaqbalka.
Fiidiyow ku saabsan Qofka Iibsanaya
Fiidiyowgaan cajiibka ah ee Suuqa Faahfaahin ka bixiyaa sida qofka wax iibsadaa uu uga caawiyo iyaga inay aqoonsadaan dulduleelada ku jira iyo sida saxda ah ee loo bartilmaameedsado dhagaystayaasha ay u badan tahay inay iibsadaan alaabadaada ama adeegyadaada. Marketo wuxuu kugula talinayaa qaababka soo socda ee muhiimka ah ee had iyo jeer lagu daro Iibsade Iibiyaha:
Name: Magaca shakhsiga ah ee la sameeyay ayaa umuuqda mid doqon ah, laakiin waxay faa'iido u leedahay in laga caawiyo kooxda suuqgeynta inay ka wada hadlaan macaamiishooda kana dhigaan wax la taaban karo qorsheynta sida loo gaaro
Age: Da'da ama da'da shaqsiyadeed waxay u oggolaaneysaa fahamka astaamaha u gaarka ah jiilka.
Waxyaabaha xiisaha leh: Maxay yihiin hiwaayadooda? Maxay jecel yihiin inay sameeyaan waqtiga firaaqada? Noocyada noocan ah ee su'aalaha ah ayaa gacan ka geysan kara qaabeynta dulucda mawduucyada ay u badan tahay inay ku lug yeeshaan.
Isticmaalka Warbaahinta: Barmaamijyada warbaahinta iyo kanaalada ay adeegsadaan waxay saameyn ku yeelan doonaan sida iyo halka lagu gaari karo.
Dhaqaalaha: Dakhligooda iyo astaamaha kale ee maaliyadeed ayaa go'aamin doona noocyada alaabooyinka ama adeegyada la muujiyey iyo barta qiimaha ama dallacaadaha macno samayn kara.
Noocyada Brand: Haddii ay jecel yihiin noocyada qaarkood, tani waxay ku siin kartaa tilmaamo nooca ay ka kooban yihiin ee ay sida fiican uga jawaabaan.
Download Sida Loo Abuuro Shaqsi Iibsada iyo Safar
Maxay Tahay Sababta Loo Isticmaalayo Qofka Wax Iibsanaya?
Sida infographic-ka hoose ku tilmaamaya, adeegsiga shaqsi iibsade ayaa ka dhigay 2 ilaa 5 jeer waxtar badan adoo bartilmaameedsanaya isticmaaleyaasha. Si toos ah ula hadalka dhagaystayaasha gaarka ah ee qoraalkaaga ama fiidiyowga si aad u wanaagsan ayey u shaqaysaa. Xitaa waxaad rabi kartaa inaad kudarto menu-ka hagista bartaada gaarka ah shaqooyinka shaqooyinka ama shaqada.
Adeegsiga shaqsi iibsade ee barnaamijka emaylkaaga waxay kordhisaa qiimaha gujinaya illaa emayllada 14% iyo qiimaha beddelka 10% - wadista 18 jeer ka dakhli badan emayllada la faafiyo.
Mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee suuqleydu u leedahay abuurista noocyada xayeysiisyada la bartilmaameedsado ee keena iibka oo kordha iyo beddelaadyada - sida nooca lagu arkay kiiska Skytap - waa qofka iibsadaha ah. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato waxa iibsadaha shaqsiyadu yihiin iyo sida ay u horumarin karaan natiijooyinkaaga ololaha suuqgeynta, ka fiiri faahfaahinta cusub ee Midho - Bartilmaameedka La Helay: Sayniska Dhismaha Qofka Iibsadaha.
Qofka wax iibsadaa wuxuu dhisaa waxtarka suuqgeynta, isku toosinta iyo waxtarka leh dhagaystayaal bartilmaameed isku mid ah leh markii uu la xiriirayo macaamiisha suurtagalka ah iyada oo loo marayo xayeysiinta, ololeyaasha suuqgeynta, ama istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Haddii aad leedahay shaqsi iibsade ah, waad u dhiiban kartaa taas kooxdaada hal-abuurka ah, ama hay'addaada, si aad uga badbaadiso waqtiga oo aad u kordhiso suurtagalnimada waxtarka suuqgeynta. Kooxdaada hal abuurka ah ayaa fahmi doona qaabka, qaabka, iyo istiraatiijiyadda gaarsiinta - iyo sidoo kale inay fahmaan meesha iibsadayaasha ay ka baarayaan meelaha kale.
Qofka Iibsadaha, markii lagu sawirayo kan Iibsashada Safarrada, waxay ka caawisaa shirkadaha inay aqoonsadaan meelaha ka dhimman xeeladaha ay ka kooban yihiin. Tusaalahaygii ugu horreeyay ee xirfadle IT ah uu ka walwalsanaa amniga, hadda xisaabiyeyaasha saddexaad ama shahaadooyinka ayaa lagu dari karaa suuq-geynta iyo agabyada xayeysiinta si xubintaas kooxda looga dhigo mid deggan.
Sida loo Abuuro Qofka Iibsada
Waxaan u muuqanaa inaan ku bilowno falanqaynta macaamiisheenna hadda ka dibna dib ugu laabanno dhagaystayaal ballaadhan. Cabirida qof walba macno malahan… xasuusnow inta badan dhagaystayaashaada waligood kaa iibsan maayaan.
Abuuritaanka shakhsiga waxay u baahan kartaa xoogaa cilmi-baaris culus oo ku saabsan khariidaynta isku-xirnaanta, cilmi-baarista qowmiyadeed, netnography, kooxaha xallinta, Analytics, baaritaanno, iyo xog gudaha ah. Inta badan maahan, shirkaduhu waxay fiiriyaan shirkadaha cilmi-baarista suuqa ee sameeya tirakoobka, xaddiga, iyo falanqaynta juqraafiyeed ee macaamiishooda, ka dib waxay ku qabtaan taxane tayo wareysiyo tayo leh macaamiishaada.
Halkaa marka ay marayso, natiijooyinka waa loo qaybsan yahay, macluumaad ayaa la soo ururiyey, qof kasta oo magaciisa la magacaabay, yoolalka ama wicitaanka-ficilka la isweydaarsaday, iyo astaanta la dhisay.
Qofka wax iibsada waa in dib loo fiiriyaa oo loo habeeyaa madaama ururkaagu badalayo badeecooyinkiisa iyo adeegyadiisa isla markaana uu helayo macaamiil cusub oo aan dabiici ahaan ku habboonayn shakhsiyadaada hadda jira.
Tags: la talinta brightsparkiibsadaha shakhsi ahaaneediibsadaha fiidiyowga qofkaqof iibsadaha ahsafarka iibsashadaabuur shaqsi iibsadetusaale personassida loo abuuro shaqsi iibsadesafarka macaamiishasuuqoastaan ​​shaqsiyeedcilmi baaris shaqsiyeeddadkapanda savvywaa maxay iibsadaha shaqsiyeedmaxaad u isticmaashaa qofka wax iibsada
Waxyaabaha Saameynta Ku Leh Sida Ugu dhakhsaha badan ee Boggaagu ugu shubo Websaydhkaaga
6-da Astaamood ee Muhiimka ah ee Logo Ganacsi